Dhaqaalaha - BBC Somali
Aftida Britain oo saamaysay dhaqaalaha adduunka
Codkii Britain ay u qaaday in ay isaga baxdo Midawga Yurub ayaa sare u qaaday halista haysata dhaqaalaha caalamka, madaxda dhaqaalaha ayaa sidaas ka sheegay shirka G20 ee Shiinaha ka socda.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Aftida Britain oo saamaysay dhaqaalaha adduunka
Britain oo amaahatay lacagtii ugu yarayd sanooyin badan
Dowladda Britain oo amaahatay lacagtii ugu yarayd tan iyo 2008-dii iyadoo amaahatay £25.6 bilyan saddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Britain oo amaahatay lacagtii ugu yarayd sanooyin badan
IMF oo hoos u dhigtay kororka dhaqaalaha
IMF ayaa hoos u dhigtay saadaalinta kororka dhaqaalaha adduunka ka dib markii Britain ay ka baxday Midowga Yurub.
19 Luulyo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan IMF oo hoos u dhigtay kororka dhaqaalaha
Hammond oo ka hadlay dajinta dhaqaalaha
Wasiirka cusub ee maaliyada ee Britain ayaa sheegay inuu ku dadaali doono sidii loo dajin lahaa dhaqaalaha Britain.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Hammond oo ka hadlay dajinta dhaqaalaha
Bangigga Salaam oo abaalmarin la siiyay
Bankiga Salaam ee xaruntiisu tahay dalka Jibouti ayaa lagu abaalmariyey sida uu Afrikada Bari uga hirgaliyey habka dhaqaale ee waafaqsan shareecada een lahayn dul-saarka.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Bangigga Salaam oo abaalmarin la siiyay
Waddamada G7 oo gaaray heshiis ka dhan ah argagixisada Wasiirada maaliyadda ee waddamada G7 ee ku hormaray dhanka warshadaha oo ku shiraya dalka Japan ayaa ku heshiiyay in tallaabo adag oo dheeraad ah la qaado, si looga hortago maalgelinta argagixisada caalamiga ah. 21 Maajo 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Waddamada G7 oo gaaray heshiis ka dhan ah argagixisada Nigeira: Jaridda kabista shidaalka.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Nigeira: Jaridda kabista shidaalka.
Britain oo ka digeysa hoos u dhac dhaqaale
Warbixin ballaaran oo dowladda Britain ay maanta soo saartay waxa ay sheegeysaan in dhaqaalaha dalkaasi uu hoos u dhacayo. 18 Abriil 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Britain oo ka digeysa hoos u dhac dhaqaale
Sicirka shidaalka caalamka oo hoos u dhacay
Qiimaha saliidda ayaa si aan caadi ahayn hoos ugu dhacaya, kaddid markii kullan ay yeesheen dadka dhoofiya ay ku fashilmeen inay heshiis gaaraan.
18 Abriil 2016
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Sicirka shidaalka caalamka oo hoos u dhacay
Sicirka shidaalka dunida oo laga arrinsanayo
Shirweyne ay isugu yimaadeen wadammada soo saara shidaalka oo ay kaga wadahadlayaan suuragalnimada in la xadido wax soo saarka shidaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu wajahay dhibaato la xiriirta kala duwanaanshaha u dhaxeeya Sucuudi Carabiya iyo Iiraan.
Si buuxda u akhri maqaalka oo dhan Sicirka shidaalka dunida oo laga arrinsanayo